Naya Post Nepal | को हुन् म्यादी प्रहरीको पोशाक लगाएर भिडियो बनाएर मनपरी बोल्दै भाइरल बनेका युवक ?
को हुन् म्यादी प्रहरीको पोशाक लगाएर भिडियो बनाएर मनपरी बोल्दै भाइरल बनेका युवक ?
कपिलवस्तु । म्यादी प्रहरीको पोशाक लगाएर भाइरल भिडियो बनाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प’क्रा”उ पर्नेमा कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका–४ का १६ वर्षीय नवराज रेग्मी रहेका छन् । कपिलवस्तु घर भएका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुबाट खटिएको टोलीले प’क्रा’उ गरेको हो ।
सेल्फी भिडियोमा उनले आफू म्यादी प्रहरी भएको भन्दै भिडियोमा ती युवकले भनेका छन्, ‘सागर, वसन्ते, किस्ने सबहरू नडरा न हो । तेरो दाई मिदी भइसकेको छ ।’ प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुबाट खटिएको टोलीले उनलाई मंगलबार नि’यन्त्रणमा लिएको छ ।
नियन्त्रणमा रहेका रेग्मीलाई सोधुपुछ गर्ने क्रममा उनी म्यादी नै नभएको खुलेको हो । राजधानि दैनिममा खबर छ । रेग्मीले आफ्ना फुपूका छोरा पुरण भट्टराईको म्यादी प्रहरीको पोशाक लगाएर भिडियो बनाएको खुलेको एसएसपी केसीले बताए ।
‘रे’म्मी म्यादी प्रहरी नभए पनि पुरण घरमा नभएको बेला उनले पोशाक लगाएको खुलेको छ,’ एसएसपी केसीले भने । प्रहरीले पुरणसँग समेत पोशाक’द’य’ग’तमा सोधपुछ गरेको छ ।
तर, पुरणले आफू घरमा नभएका बेला पोशाक लगाएर दुरुपयोग गरेको प्रहरीलाई बताएका छन् । सार्वजनिक अ’प’रा’ध र अ’भ’द्र व्य”व’हार गरेको कसुरमा उनीहरुवि’रु”द्ध मुद्द च’लाइ’ने प्रहरीले जनाएको छ ।
२०७९ बैशाख २२, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 1932 Views